Shaqaala Hey’adeed Oo Lagu Dilay Dalka Itoobiya. – Calamada.com
Shaqaala Hey’adeed Oo Lagu Dilay Dalka Itoobiya.
calamada September 7, 2019 1 min read
Mid kamida hay’adaha reergalbeedka ee ka howgala bariga qaaradda Afrika ayaa ku dhawaaqday in ay joojisay shaqadii ay ka haysay wadanka Itoobiya kadib markii ladilay qaar kamid ah shaqaalaheeda.
Hay’adda lagu magacaabo ka hortagga jaagada (Action Against Hunger) ayaa sheegtay in si KMG ah ay ujoojisay shaqadii ay ka haysay wadanka Itoobiya saacado kadib markii toogasho lagu dilay laba kamid ah howlwadeenadeeda.
War qoraal ah oo kasoo baxay hay’adda ayaa lagu sheegay in weerar ka dhacay gobolka Gambela lagu dilay laba mas’uul oo ka mid ahaa howlwadeenadeeda ka howlgalayay xarunta Nguenyyil Centre ee Itoobiya.
Saraakiisha ammaanka ee gobolka Gambela ayay hay’addu ku dhaliishay in ay ka gaabiyeen soo qabashada kooxihii hubeysnaa ee weerarka dhabagalka ah ku dilay howlwadeenadeedi, hay’addan ayaa Itoobiya ka shaqeynaysay tan iyo sanaddii 1985.
Previous: Gaadiidka Gaashaaman Ee Shisheeyaha Oo Wiil Yar Ku Jiiray Baraawe.
Next: Weeraro Askar Lagu Dilay Oo Ka Kala Dhacay Qoryooley Iyo Baydhabo.